Yoosiyaah Saaxiibbo Fiican Buu Lahaa | Carruurtaada Wax Bar
Yoosiyaah Saaxiibbo Fiican Buu Lahaa
Miyaad u maleysaa inay adagtahay in waxa fiican la sameeyo?— Dad badan waxay u maleeyaan inay adagtahay. Kitaabka wuxuu ka hadlaa wiil Yoosiyaah la dhaho. Wiilkan aad bay ugu adkayd inuu waxa fiican sameeyo. Haddaba wuxuu haystay saaxiibbo fiican oo caawiyay. Bal aan wax ka sii baranno Yoosiyaah iyo saaxiibbadiis.
Yoosiyaah aabbihiis Aamoon wuxuu ahaa boqorka dalka Yahuudah. Aamoon nin aad u xun buu ahaa oo sanamyo caabuda. Markuu dhintay wiilkiisa Yoosiyaah baa boqorka dalka Yahuudah noqday. Laakiin siddeed sano keliya buu jiray! Maad u maleysaa inuu sidii aabbihiis oo kale xumaa?— Maya wuu fiicnaa!
Sefanyaah dadkii wuxuu digniin ka siiyay inaysan sanamyo caabudin
Yoosiyaah xitaa markuu aad u yaraa Yehowah inuu dhegeystuu rabay. Sidaas darteed wuxuu doortay saaxiibbo Yehowah jecel keliya. Saaxiibbadan waxay Yoosiyaah ku caawiyeen inuu waxa fiican sameeyo. Aan aragno kuway ahaayeen saaxiibbadii Yoosiyaah.
Mid ka mid ah saaxiibbada Yoosiyaah wuxuu ahaa Sefanyaah. Sefanyaah nebi buu ahaa. Dadka dalka Yahuudah digniin buu siiyay. Wuxuu ku yiri haddii ay sanamyo caabudaan waxyaalo xun baa ku dhici doona. Yoosiyaah digniintii Sefanyaah wuu dhegeystay. Sanamyo muu caabudin Yehowah buu caabuday.
Mid kale oo ka mid ahaa saaxiibbada Yoosiyaah waa Yeremyaah. Yeremyaah iyo Yoosiyaah isku fil bay ahaayeen. Isku meel bayna ku soo koreen. Yeremyaah aad buu saaxiib fiican ula ahaa Yoosiyaah. Oo markuu Yoosiyaah dhintay Yeremyaah wuxuu u qoray gabay baroor ah oo ka hadlaya siduu ugu xiisay. Yeremyaah iyo Yoosiyaah waxay isku caawiyeen inay waxa fiican sameeyaan oo Yehowah dhegeystaan.
Yoosiyaah iyo Yeremyaah waxay isku caawiyeen inay waxa fiican sameeyaan
Sheekadii Yoosiyaah maxaad ka baran kartaa?— Xitaa markuu wiil yar ahaa Yoosiyaah wuxuu rabay inuu waxa fiican sameeyo. Wuxuu ogaa inuu la saaxiibo dadka Yehowah jecel. Adigana dooro saaxiibbo Yehowah jecel oo kugu caawin kara inaad waxa fiican sameysid!
2 Taariikhdii 33:21-25; 34:1, 2; 35:25
Yoosiyaah aabbihiis yuu ahaa? Waxa fiican muu sameyn jiray?
Ilaa markuu wiil yar ahaa Yoosiyaah muxuu rabi jiray inuu sameeyo?
Yay ahaayeen labadii saaxiib oo Yoosiyaah?
Sheekadii Yoosiyaah maxaad ka baran kartaa?
Wadaag Wadaag Yoosiyaah Saaxiibbo Fiican Buu Lahaa